Zvimwe Zvekushandisa Fekitori - China Zvimwe Zvigadzirwa Vagadziri, Vatengesi
Mishonga inorwisa mabhakitiriya-Mumiriri
Chemical Zita: 1,2-Propyleneglycol diacetate CAS NO.:623-84-7Morecular Formula: C7H12O4Moremu Kurema: 160 Tsanangudzo Chitarisiko: Bvisa isina ruvara mvura Moremu uremu: 160 Kuchena%: ≥99 Kubikira Poindi （101.3kPa）: 190 ℃ ± 3 Yemukati yemvura%: ≤0.1 Flash poindi, yakavhura mukombe）: 95 ℃ Acid kukosha mgKOH / g: -0.1 Refractive index （20 ℃）: 1.4151 Hukama hwehukama （20 ℃ / 20 ℃）: 1.0561 Ruvara （APHA）: ≤ 20 Yekushandisa Mvura inogadzirwa netsvo kugadzirwa, inonaya mvura inogadzira vamiririri kugadzirwa, inonaya mvura inotetepa (Hydrophobic ...
Chigadzirwa Chigadzirwa: Ethylene glycol tertiary butyl ether (ETB) CAS No.: 7580-85-0Moremura fomula: C6H14O2Moremu uremu: 118.18 Panyama uye makemikari zvimiro Ethylene glycol tertiary butyl ether (ETB): An organic organic material, isina ruvara uye yakajeka irinotsva. zvinodhaka zvine mint flavour. Inonyungudika mumazhinji solvents, inogona kuputsa amino, nitro, alkyd, acrylic uye mamwe mains. Pakamuri tembiricha (25 ° C), inogona kusanzwisisika nemvura, yakaderera chepfu, yakaderera kutsamwa. Nekuda kwayo ...
Yakadzivirirwa Isocyanate Crosslinker KL-120
Chemical zita: Yakavharidzirwa Isocyanate Crosslinker technical index: Chitarisiko chakacheneruka yero viscous mvura Solid zvemukati 60% -65% Inoshanda NCO zvemukati 11.5% Inoshanda NCO yakaenzana 440 Viscosity 3000 ~ 4000 cp pa 25 ℃ Kuwedzera 1.02-1.06Kg / L pa25 ℃ Unseal tembiricha 110-120 ℃ Kupararira kunogona kunyungudika mune zvakajairika manyowa, asiwo zvakanyatsopararira mumvura kupfeka. Zvirongwa zvekushandisa: Mushure mekurapa kwekupisa, iko kutsanya kwependi firimu kunogona kuvandudzwa zvakanyanya nekuiwedzera kune iyo ...
Chigadzirwa Chigadzirwa: Iyo inochinjika crosslinking mumiriri yeakasiyana-siyana epolymiki zvigadzirwa, zvese organo yakanyungudika uye mvura inotakurwa. Izvo zvinhu zvepolymeric zvinofanirwa kunge zvine hydroxyl, carboxyl kana amide mapoka uye zvinogona kusanganisira alkyds, polyesters, acrylic, epoxy, urethane, uye cellulosics. Chigadzirwa Chigadzirwa: Yakanyanya kuomarara-firimu inochinjika.
WETTING MUMWE OT75
Chigadzirwa chigadzirwa: Anionic surfactant Sodium diisooctyl sulfonate Specification Chitarisiko: isina ruvara kune yakajeka yeyero yakajeka mvura PH: 5.0-7.0 (1% yemvura mhinduro) Kupinda (S.25 ℃). ≤ 20 (0.1% mhinduro yemvura) Zvemukati zvinoshanda: 72% - 73% Solid zvemukati (%): 74-76% CMC (%): 0.09-0.13 Zvishandiso: OT 75 ine simba, anionic yekunyorova mumiririri ine kunyorova kwakanyanya, kugadzirisa uye emulsifying chiito pamwe nekukwanisa kudzikisira kusagadzikana kwepakati. Sezvo wetting mumiririri, zvinogona kuva u ...
Chigadzirwa Chigadzirwa CAS NO. Kushanda Crosslinking mumiririri Hyper-Methylated Amino Resin DB303 - Zvemagetsi zvinopedzisa, Midziyo yemidziyo, Midziyo mizhinji inopedza, Yakasimba yakasimba inopedza, Mvura inotakurwa inopedzisa, Coil kupfeka. Pentaerythritol-tris- (ß-N-aziridinyl) propionate 57116-45-7 Simbisa kunamatira kweiyo lacquer kune akasiyana substrates, kugadzirisa mvura yekukwiza kuramba, chemakemikari ngura, yakanyanya kupisa tembiricha uye kupokana kupokana kwependi yepamusoro Yakavharwa Iso .. .
Propylene Glycol Phenyl Eteri (PPH)
Zvisungo: 3-Phenoxy-1-propanol Molecular fomula: C9H12O2 Molecular uremu: 152.19 CAS HERE: 770-35-4 technical index: Kuedza Zvinhu Maindasitiri giredhi Chitarisiko Chiedza yero mvura Muedzo% -90.0 PH 5.0-7.0 APHA -100 Use: PPH haina mvura isina kujeka uye inonhuwirira inotapira. Hazvina-chepfu uye zvakatipoteredza zvine hushamwari maficha ekudzora pendi V ° C maitiro anoshamisa. Sezvo inoshanda coalescent akasiyana emulsion emvura uye akapararira kupfeka mu gloss uye semi-gl ...
Chemical zita: Pentaerythritol-tris- (ß-N-aziridinyl) propionate Molecular fomula: C20H33N3O7Moremu uremu: 427.49 CAS Nha .: 57116-45-7 technical index: Chitarisiko chisina ruvara kune yero yakajeka yakajeka Mvura solubility inonyatsonzwisisika nemvura pa1: 1 isina stratification Ph (1: 1) (25 ℃) 8 ~ 11 Viscosity (25 ℃) 1500 ～ 2000 mPa · S Solid zvemukati ≥99.0% Yemahara amine -0.01% Iyo nguva inodonha ndeye 4 ~ 6 h Kukwesha kwesha ...
Zvinowanikwa: Ethylene glycol diacetate Molecular fomula: C6H10O4Morecular uremu: 146.14 CAS NO.: 111-55-7 technical index: Chitarisiko: Isina kuchena yakajeka mvura Yemukati: ≥ 98% Unhu: ≤ 0,2% Ruvara (Hazen): ≤ 15 Huturu: ndoda isina-chepfu, rattus norvegicus yemuromo LD 50 = 12g / Kg uremu. Shandisa: Seyakagadziriswa kupenda, zvinonamatira uye pendi zvigadzirwa zvekugadzira. Kugovana kana kutsiva zvachose Cyclohexanone, CAC, Isophorone, PMA, BCS, DBE nezvimwe, zvine maficha ekuvandudza kuenzanisa, kugadzirisa kuomesa s ...